गायिका शान्ति श्री परियारको आवाजमा अन्जली अधिकारीको आज सम्मकै फरक अभिनय , मन छोयो यो गीतले ( भिडीयो ) – Charchit Entertainment
गायिका शान्ति श्री परियारको आवाजमा अन्जली अधिकारीको आज सम्मकै फरक अभिनय , मन छोयो यो गीतले ( भिडीयो )
काठमाडौं / आखिर प्रेमनै सबै भन्दा ठुलो रहेछ। आमा बुवाको प्रेम अनि आन्तरिक प्रेममा निकै फरक छ तर माया गर्ने जोडीलाई भने माया नै ठुलो रहेछ। यहि प्रेममा कतिपय सफल भयका छन् भने कतिपयले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु परेको हामीले सुन्न अनि देख्न सक्छौ। हुन त मायाप्रेम बिना संसार नै अधुरो रहनछ। मिठा मिठा सपना बोकेर हिडेका ति परेवाका जोडी जस्तै एक जोडीमा घटेको घटना हो।
मायाले पागल बनायो दुरी बढायो तर माया भने उत्तिकै रहिरहेको छ। एक अर्कालाई खोज्दै भौतारियाका ति नमुना जोडीले समाजबाट नै धोका पाउन पर्यो। यस्तै यस्तै घटनाले आज कतिपय जोडीको बिछोड भयको छ भने कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेका छन्।
यस्तै घटनालाई कल्पित गर्दै गित मार्फत उतारेका छन् कलाकारहरुले। लोकप्रिय गायिका शान्ति श्री परियार र गायक कुशल बेलबासे को सुमधुर आवाजमा उनै बहुचर्चित गायक तथा सर्जक कुशल बेलाबासेकै लय तथा शब्द सिर्जनामा एक हृदयाबिदारक कथामा आधारित लोक गित हातैको पन्जाले बजारमा सार्बजनिक भयको छ।
भिडियो तर्फ प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेका छन् भने नवराज उप्रेतीले छायांकन गरेका छन् र बिष्णु शर्माले उक्त भिडियो सम्पादन गरेका छन्। उक्त भिडियोमा ओबी रायमाझी र अन्जली अधिकारीको मन छुने अभिनय रहेको छ।
उक्त गीतलाई नवराज पन्तको आधिकारिक युटुब च्यानल मार्फत बजारमा सार्बजनिक गरियको छ। बिछोडियका जोडीको मिलन भयो कि भयान होला ? आखिर कहिले सम्म यस्तो समस्यामा अल्झनु पर्ने साचो माया गर्ने जोडी ?
हेर्नुहोस भिडियो //
आम्दानी र बचत व्यवस्थापन गर्न सघाउने नेपाली एप
अश्मित पोखरेलको निर्देशनमा ‘तिम्रो सरीर’ सार्वजनिक (भिडियो सहित )